Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya oo gaaray Muqdisho, lana kulmay madaxa dawladda federaalka. – Radio Daljir
Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya oo gaaray Muqdisho, lana kulmay madaxa dawladda federaalka.
Mogadishu,Feb 8 -Wakiilka gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan arimaha Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay madaxwaynaha iyo raysal wasaaraha dowladda KMG ah ee Soomaaliya kadib markii maanta uu booqday Muqdisho.
Raysal wasaare Cabdiwali Maxamed Cali oo shir jara’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay danjirahaa Midowga Yurub ee Arimaha Soomaaliya Alexander de Rhodes inay kawada hadleen arimo la xiriira sare u qaadida amaanka deeganaada laga saaray Al-Shabaab,Shirka London ee loo balansaynyahay 23ka bishaan,iyo qaabkii ay dowladda KMG Soomaaliya uga gudbi lahayd xiliga KMG.
Danjire Alexander de Rhodes oo isaguna hadlay ayaa waxaa uu sheegay inuu ku faraxsanyahay booqashadii ugu horaysay ee uu ku tagay magaalada Muqdisho,isagoo ah wakiilka Midowga Yurub ugu qaybsan arimaha Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay Midowga Yurub inuu ka koobanyahay 500-Milyuun oo midoobay,waxaana uu sheegay Midowga Yurub inuu sii wadi doono wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jirta dalka Soomaaliya.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika Somaliya Jerry Rawlings ayaa isaguna shalay gaaray magaalada Muqdisho,halkaasi oo wada hadalo kula leeyahay madaxwaynaha iyo raysal wasaaraha dowladda KMG ah ee Soomaliya.